Itoophiyaaf carraan maqaa hawwaa moggaasuu maaliif kennameef? - BBC News Afaan Oromoo
Waajirri Ministeera Muummee hawwaa haaraa argamteef karaa toora bilbilaa 920 tiin ergaa gabaabaa erguun akka mogaasan carraan kenne Caamsaa 30, 2019 xumurame.
Namni hanga saatii dhumaatti akka maqaa ni ta'a jedhu ergaa gabaabaa karaa 920 akka ergus waajirri ministeera muummichaa waamicha dhiyeessee ture.
Hoji-gaggeessituun Hawwaasa Ispees Saayinsii Itoophiyaa Beezaa Tasfaayee maqaa mogaasuun kun carraan dhaloota keessatti kaka'umsaafi fedhii kan uumuufi biyyaaf faayidaa guddaa waan qabuufis itti fayyadamuun barbaachisaa akka ta'e ibsan. "Haaluma kanaan namoonni irratti hirmaachuu danda'u jechuudha."
'Barataa kutaa jahaa beekumsa Hawwaa addaa qabu'
Itoophiyaaf carraan maqaa moggaasuu maaliif kennameef?
Aadde Beezaan akka ibsanitti Itoophiyaan sirna hawaatiin biyyoota addunyaatti makamuudhaaf, darbees dorgomuudhaaf Ispees Saayinsiin Itoophiyaa waggoota 15 dura erga hundeeffamee booda carraaqqiiwwan hedduun taasisaa turteetti.
Kanumaan walqabatees, beekamtiin sadarkaa idil-addunyatti gama kanaan beekamtus akka dabalaa dhufu taasiseera.
Bara 2012 keessa waldaa hawaa addunyaatti makamuun, akkasumas imaammataafi tarsiimoo hawwaa qixeeffachuun Itoophiyaan milkaa'ina argamsiisaa dhufteetti, jetti Aadde Beezaan.
Itoophiyaan dhimma saayinsii hawaa irratti biyyoota murteessuu danda'an ja'a keessaas ishee tokkodha jetti Aadde Beezaan.
Carraaqqii Itoophiyaan taasistu kanneen ilaalcha keessa galchuufi hirmaannaa akka addunyaatti taasisaa jirtuuf beekamtii kennuudhaaf, Waldaan Gamtaa Hawaa Addunyaa (International Astronomical Union) carraa maqaa kana moggaasuu Itoophiyaaf kenneera jetti Aadde Bezaan.
Hoji-gaggeessituun kun yeroo ibsitutti, Galaaksii keenya keessatti argamuun kan bira ga'ameefi maqaa saayinsaawaa HD 16 175 urjii jedhamuufi HD 16 175 B Pilaanetii jedhaman siistema keessatti argamanidha kan Itoophiyaan akka moggaaftuuf carraan kennameef.
"Itoophiyaan saayinsii ispeesiidhaan milkaa'ina argamsiiste waan qabduuf kanaaf beekamtii kennuudhaaf, ija addunyaas gara biyya keenyaatti deebisuudhaaf carraa argamedha," jette.
Hawwaasa Ispees Saayinsii Itoophiyaatti Dubbi Himaa kan ta'an Obbo Phaawuloos Alamaayyoos carraan akka Itoophiyaan moggaastuuf kennameef kun milkaa'ina biyyattiin yeroo dhiyoo asitti damee hawaa keessatti argamsiifteefi carraaqqii gochaa jirtuuf jedhan.
Akka Obbo Phaawuloos miidiyaa biyya keessaaf ibsanitti, qaamoleen hawaa maqaa Itoophiyaa irraa ta'een waamamuun kun kan jalqabaa miti.
"Kaasiyooppiyaa, Andiroomeedaa maqaan jedhaman jiru. Isaan kunneen waggoota kuma hedduu dura uummanni Itoophiyaa akka turaniifi saba guddaa akka ta'an, kan qorataniifi moggaasan akka ta'an hubachuun moggaasa kanaan akka waamaman taasiseera.
Bara kana keessas carraan kun deebiyee nuuf kennamuun isaas waan guddaadha," jedhan.
Qaamni hawaa akka Itoophiyaan moggaaftuun carraan kennameef kun Milkway Galaaksii isuma nuti keessa jirra kana keessatti kan argamu ta'ee fageenya waggaa ifaa 196 irratti argama.